Kwakungubani uRafael Cordero, ubaba wezemfundo yomphakathi ePuerto Rico? - I-AFRIKHEPRI
Kwakungubani uRafael Cordero, ubaba wezemfundo yomphakathi ePuerto Rico?
Ama-Myth and Mysteries aseGibhithe - uRudolf Steiner (PDF)
RU-Abael Cordero owaziwa njengobaba wezemfundo yomphakathi ePuerto Rico wayeyindoda efundisayo eyanikeza izingane imfundo yamahhala, kungakhathalekile ukuthi zinjani futhi zinjani emphakathini. URafael wazalelwa eSan Juan emndenini ompofu, wabazali abangama-Afro. Uthando lwakhe ngezincwadi nokuzimisela kwakhe ukufundisa kwamholela ekutheni azifundise futhi ekugcineni wafundisa isikole samabanga aphansi. Ngasekupheleni kwekhulu le-19, uRafael wavula isikole sasekhaya, samahhala sezingane, kungakhathalekile ukuthi ngabe uluhlanga luni, olunabazali ababengeke bakhokhele imali yesikole kwenye indawo. UCordero wagcina isikole sakhe iminyaka engu-58 kuLuna Street eSan Juan. Wafundisa izibalo, ukufundwa, ukubizwa kwe-calligraphy nezinye izifundo eziningi Phakathi kwalabo ababafundi bakhe kwakunoRomán Baldorioty de Castro, Alejandro Tapia y Rivera noJosé Julián Acosta. Wavuzwa yiklabhu eyayimnikeza ama-pesos ayi-100, ingxenye yawo ayeyisebenzisela ukuthenga izingubo nezingubo zabafundi nenye ingxenye ayinikeza abantu abangenamakhaya. Uthando nenhlonipho uPuerto Ricans ayenayo yabonakala kakhulu, ngoba abantu abangaphezu kuka-2000 baya emngcwabeni wakhe ngonyaka we-1868. Kunemiklomelo eminingi nezikweletu zokuphambuka kwakhe. Imbongi yasePuerto Rican uJosé Gualberto Padilla yashicilela inkondlo ebizwa ngokuthi i-el maestro Rafael inikele kuthisha, ngo-1890 umdwebi wapenda isithombe sikaRafael, isikole samabanga aphansi lapho uRafael afundise khona wavuselelwa nguhulumeni wasePuerto Rico futhi eqashelwa njengesiza somlando. Izikole eziningana zibizwa ngegama lakhe, kufaka phakathi isikole samabanga aphansi eSan Juan, isikole samabanga aphansi e-Aguadilla, isikole samabanga aphansi eNew Jersey, nesikole samabanga aphakeme eBrooklyn.
Ukuhlelela impumelelo: Indlela ye-GTD - UDavid Allen (Audio)